Ihotele yaseSeverin: Intandokazi yabakhweli koololiwe abangama-300 bemihla ngemihla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Ihotele yaseSeverin: Intandokazi yabakhweli koololiwe abangama-300 bemihla ngemihla
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ihotele yaseSeverin yasekuqaleni yavulwa ngo-1913 xa yayithatha indawo yeGrand Hotel yase-Indianapolis. Indawo yayo ngqo ngaphesheya kweJackson Indawo ukusuka kwiSikhululo soManyano yenze ukuba ibe yeyona hotele ithandwayo kubakhweli koololiwe bemihla ngemihla abangama-300.
Yakhiwa nguHenry Severin, Omnci., indlalifa kwi-wholesale grocery fortune, ngoncedo lwabaphuhlisi bezindlu nezindlu uCarl Graham Fisher noJames A. Allison.
UFisher kunye no-Allison bakhe i-Indianapolis Motor Speedway yodumo.
Ihotele yayiyilwe nguVonnegut kunye noBohn, inkampani yezokwakha esebenzayo ekuqaleni ukuya kumbindi wenkulungwane yama-20 e-Indianapolis.
Xa uBernard Vonnegut, Sr. wafa ngo-1908, walandelwa ngunyana wakhe uKurt Vonnegut, Sr. owathi kamva waba nguyise kaKurt Vonnegut, Omnci., umbhali weencwadi odumileyo.
IGrand Hotel yakhiwa ngo-1876 kwaye, ngaxesha lithile, yayiyeyeHotele uThomas Taggart owathi emva koko waba ngumnini weFrench Lick Springs Hotel. UTaggart kamva wasebenza njengoSodolophu wase-Indianapolis kunye noSenator wase-US ovela e-Indiana.
Ngomhla we-19 kaFebruwari, 1905, umlilo owaqala kwivenkile enkulu yemizi-mveliso yendlu kaFahnley & McCrea, wanwenwela kwizakhiwo ezisibhozo ezidityanisiweyo kuquka neGrand Hotel, ngoko eyayiyeyona hotele inkulu e-Indiana. Kwimizuzu engamashumi amane anesihlanu, izakhiwo ezisibhozo kweso sithili sisengozini zazitshatyalaliswe ngokupheleleyo. Nangona ilahleko yepropati ibekwe kwi-1.1 yezigidi zeedola, i-Grand Hotel yasindiswa ngethamsanqa kumonakalo omkhulu.
IHotele iSeverin ikwindawo encomekayo kwiWholesale District skyline ejongene neSikhululo soManyano kunye noninzi lweehotele ezingabamelwane. Ihotele enemigangatho elishumi elinambini yakhiwe ngesakhelo sekhonkrithi eyomeleziweyo kunye neendonga zomkhusane wezitena. Uxande kwisicwangciso, lizibhayi ezilishumi elinanye ububanzi ecaleni kwesitalato iWest Georgia kunye neebhayi ezintlanu ecaleni kweSouth Illinois kunye neMcCrea Street. Imigangatho emibini yokuqala icwangciswe kwisikim seRenaissance yeefestile ezinkulu zearch. Ukususela kumgangatho wesithathu ukuya kumgangatho weshumi elinesibini, iifestile ezixande zilandela ipateni yegridi efanayo.
Abanini abaliqela abohlukeneyo balawula ihotele de yathengwa ngo-1966 nguWarren M. Atkinson owayibiza ngokuba yiAtkinson Hotel. Ngomnyaka we-1988, i-Mansur Development Corporation yathenga ihotele kwaye, emva kokubuyiselwa kwe-40 yezigidi zeedola, yayithiya kwakhona i-Omni Severin Hotel. Ngexesha lolungiso, iinqaba ezimbini ezitsha ezinemigangatho elishumi elinesibini zaye zakhiwa kwaye ihotele eyandisiweyo yadityaniswa ne-Circle Centre Mall kunye neziko lendibano.
Indawo yokuqala yokwamkela iindwendwe ikwigumbi lebhola leSeverin yanamhlanje. Iintsimbi ezihonjisiweyo ezilahlekileyo ngasentla kwegumbi lokwamkela iindwendwe zafunyanwa kwishedi ekwiikhilomitha ezingama-30 ukusuka ehotele kwaye zafakwa kwindawo yazo yokuqala. Ibhokisi yeposi yobhedu ka-1913 isasebenza njengebhokisi yeposi esebenzayo unanamhla oku. Izinxibo zoqobo zegumbi leendwendwe le-mahogany zibekwe kwindawo nganye yokumisa kwilifti. Kwi-Severin Ballroom, i-chandelier egqwesileyo yase-Austrian yekristale kunye nezinyuko ezimangalisayo ezenziwe ngebhastile zikhumbula imbali entle yehotele. Ihotele i-Omni Severin idweliswe kwiRejista yeSizwe yeeNdawo zeMbali kwaye ililungu le Iihotele zeMbali zaseMelika.
• Abanini beehotele abakhulu baseMelika: Oovulindlela beshishini leehotele (2009)
Yakhelwe Ukugqibela: I-100 + i-Old-Old Hotels kwi-East ye-Mississippi (ngo-2013)
• Ihotele iMavens: uLucius M. Boomer, uGeorge C. Boldt, uOscar waseWaldorf (2014)
• Abanini beehotele abakhulu baseMelika uMqulu 2: Oovulindlela beshishini leehotele (2016)
Yakhelwe Ukugqibela: Ii-100 + zeMinyaka eliDala kwiihotele zaseNtshona eMississippi (2017)
Ihotele Mavens Umqulu 2: Henry Morrison Flagler, Henry Bradley Plant, Carl Graham Fisher (2018)
• I-Great American American Architects Umqulu I (2019)
• Ihotele iMavens: Umqulu 3: Bob kunye noLarry Tisch, uRalph Hitz, uCesar Ritz, Curt Strand
Zonke ezi ncwadi zinokuodolwa kwi-AuthorHouse ngokundwendwela stanleyturkel.com kwaye ucofa isihloko sencwadi.